Ihowuliseyili Synthetic Polycrystalline Diamond (PCD) yokuCoca ukugaya izinto ezingatyisi uMenzi kunye noMthengisi | SinoDiam
I-PCD isetyenziselwa ngokubanzi ukwenza iinyithi ezingenazintsimbi kunye nealloys, ezinje ngealuminium, ubhedu, ialuminiyam / iinxalenye zentsimbi engwevu, kunye nezinto ezingezizo ezesinyithi ezinje ngomthi, i-chipboard, iiseramikhi, iplastiki, irabha njlnjl. Ukugqitywa komphezulu kuyafuneka.
I-SinoDiam yamanye amazwe inikezela uluhlu olubanzi lwePCD kwisicelo esahlukileyo, kwaye inokusika amacandelo
size njengesicelo sabathengi
Ikhowudi # Ububanzi (mm) Maleko Diamond (mm) Ukuphakama (mm) Ubungakanani bedayimane (μm) Uphawu Ukusetyenziswa
I-SDPD032-A 48.0 0.5 ± 0.15 I-1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 30 + 2 Ukumelana kakhulu esirhabaxa kakhulu. Ukuqina kwempembelelo komelezwa ngumyalelo we-025-A, 025-B, 032-A kunye no-032-B, ukusebenza kwe-EDM kusomeleza ngokomyalelo we-025-A, 032-A, 032-B kunye no-025-B Isetyenziswe kwizixhobo ezirhabaxa, ezinje ngeceramic, isinyithi esomeleleyo, i-silicon carbide, ilitye kunye ne-laminate flooring.
I-SDPD032-B 48.0 0.5 ± 0.15 30 + 2 Ngokukodwa isetyenziswe kwi-chipboard nakwezinye iindawo apho zifuna ukutya okrwada.
I-SDPD025-A 48.0 0.5 ± 0.15 25 Isetyenziswe kumgangatho olaminethiweyo, kwibhodi yoxinano, izixhobo zecarbon fiber, i-silicon carbide, high-silica aluminium alloy.
I-SDPD025-B 48.0 0.5 ± 0.15 25 Isetyenziswa ekwenziweni kweebhanti zemithi eziqhelekileyo kunye neemveliso ezifuna i-EDM. ukusika.
I-SDPD012-A 48.0 0.5 ± 0.15 10 + 2 Ukudibanisa ukuxhathisa okuphezulu, ukungqubana kwempembelelo kunye neqondo eliphezulu lokugqiba komhlaba. Ukuxhathisa okungafunekiyo kuyomelezwa ngumyalelo we-010-C, 010-B, 012-A kunye no-010-A. Ubunzima bempembelelo ngu-010-A, 012-A, 010-B kunye no-010-C, ukusebenza ngokusika kwe-EDM ngu-010-A, 012-A, 010-C kunye no-010-B. Isetyenziswe ekuqhubeni kakuhle iibhodi zesekethe, i-silicon-aluminium alloy kunye ne-alloy alloy
I-SDPD010-A 48.0 0.5 ± 0.15 10 Isetyenziswa ekuqhubeni iinkuni, iibhodi zesekethe, iphantsi yesilicon-aluminium ingxubevange kunye neseramikhi entle.
I-SDPD010-B 48.0 0.5 ± 0.15 10 Isetyenziswa ekwenzeni zonke iintlobo zamacandelo ngokusika kwe-EDM.
I-SDPD010-C 48.0 0.5 ± 0.15 10 Isetyenziswe kwiindawo ezinokulungiswa kakuhle apho zifuna ukutya okrwada kunye nokumelana okuphantsi.
I-SDPD005-A 48.0 0.5 ± 0.15 5 Ubungqongqo bempembelelo ephezulu, efanelekileyo yokusika i-EDM, isidanga esiphezulu kakhulu sokugqiba umphezulu. Isetyenziswe kwiindawo ezifuna ukugqitywa kobuso obuphezulu, njenge-silicon-aluminium alloy ephantsi, isinyithi esingenantsimbi, isemiconductor kunye neplastiki.
Egqithileyo I-SND-R20 yePremiyamu yeBakala eBlocky kunye nokuKhathazeka okuMncinci kwi-Resin Bond Diamond
Okulandelayo: IPolycrystalline Cubic Boron Nitride (PCBN) yeZicelo zoMatshini
FCZ925 Per Powered Metal Powder Isetyenziswa Granit ...
MBD10 Ukuqina okuphezulu Ubungakanani obuLungileyo kweDayimane Powder F ...